Erdogan: Soomaaliya waxay naga dalbatay in aan shidaal usoo saarna |
Erdogan: Soomaaliya waxay naga dalbatay in aan shidaal usoo saarna
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa telefishenka NTV ee dalka Turkiga ee ayaa kusoo warrantay in madaxweynaha Turkiga, Reajab Teyp Erdogan uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay Turkiga ku casuumtay in ay soo saarto shidaalka ku jira badda Soomaaliya, kadib markii xukuumadda Ankara ay heshiis kaas lamid ah oo dhanka badda ah ay la saxiixatay Libya sanadkii lasoo dhaafay.
“Waxaa jira dalab inooga yimid Soomaaliya, waxaana ay yirahdeen ‘shidaal ayaa ku jira baddeena, arrin taas la xiriirtana waxaad ka wadaan dalka Libya, sidookalena Soomaaliya wad kasoo saari kartaan,”ayuu yiri Erdogan.
BBC-da ayaa isku dayday in arrintan ay wax ka weydiiso Dowladda Soomaaliya, balse nooma aysan suurtagelin in aan wax jawaab ah ka helno.
Hadalka Erdogan ayaa kusoo aaday xilli dhawaan labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya uu meel mariyay sharciga batroolka, kaas oo haatan horyaala madaxweynaha.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in dhawaan ay u guda gasho shati bixinta shidaalka, kaas oo lasiin doonaa shirkada ku guuleysta tartanka.
Turkiga oo ah dalka ugu badan ee gargaarka siiya Soomaaliya kadib wixii ka dambeeyay macluushii sanadkii 2011-ka ayaa sanadihii dambe waxaa uu xoojiyay saameynta uu ku leeyahay geeska Afrika, si uu uga hortago saameynta wadamada Sacuudiga iyo Imaaraatka ee gobolka.
Maalma kahor ayay ahayd markii Injineero u dhashay dalka Turkiga lagu dilay Soomaaliya, kuwaas oo dhisayay wadooyinka Muqdisho ku xira magaalooyinka Jowhar iyo Afgooye.
Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale tababarta ciidamada milateriga Soomaaliya, waxaana lsadhig weyn uu ku leeyahay magaalada Muqdisho.
Bishii November ee sanadkii hore, Dowladda Turkiga ayaa heshiis dhanka badda ah la saxiixatay dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee Libya, arrintaas oo ka careysiisay dalalka Greeka iyo Qubrus oo xuduud la leh Turkiga.
Xukuumadda Greeka iyo dalka Turkiga ayaa isku heysta kheyraadka ku jira xeebaha jasiiradda Qubrus ee kala qeybsan.